Diamond Hasha, Madhayamondi, Dhaimani Upfu - SinoDiam
Fonera Us: 0086-13937187660
Chakaita zvokugadzirwa Diamond Powder
HPHT Lab Yakakura Dhayamondi
Yapedza Kucheka Diamond
Akaona Grit Diamond
Simbi Bhandi Mesh Diamond
Mvere Mesh Diamond
Asiri-Mhete Mesh Diamond
Resin Bond Mesh Saizi
General Chinangwa Kunyorera
CBN Micron Saizi
Dhaimani Kukwiza Chikamu
Polycrystalline Daimondi (PCD)
Yakagara-Yakagadziriswa Poda YeGeneral Chinangwa
Pre-Yakagadziriswa Poda Yehunyanzvi Kunyorera
Solution Provider yeInternational Diamond vatengi
Akapenya Cheka Syntheti ...
Diamond Achirova Abrasi ...
CBN-MB10 Nhema Cubic B ...
CBN-MA10 Cubic Boron N ...
Polycrystalline Cubic ...
Chakaita zvokugadzirwa Polycrystall ...
SND-R20 Yekutanga Giredhi ...
SND-R15 Standard Giredhi ...
SND-R10 Hupfumi Giredhi ...
SND-R05 Wepamusoro soro Friabi ...
1308 PDC vematombo For G ...
Polycrystalline Diamoni ...
A20 Goridhe Ruvara CBN A ...
SI1-SI2 B Giredhi HPHT M ...
SND-G10 Yero RVD Cur ...
SND-G05 Green RVD Inotuka ...
VS VVS Chikamu cheHPHT La ...
CCS25 Cu Co Sn Ko ...
FCZ925 Per Yakagadzirwa Met ...
FCP321 Yakafanogadzirwa Pow ...
FCC58 FeCoCu Pre chiwanikwa ...
CCS25 FeCuSn Pre-chiwanikwa ...
Mhangura chiwanikwa upfu C ...
Yepamberi yepasi rese yekugadzira tekinoroji uye mhando yepamusoro
Kubvumbi-08-2021 Polycrystalline diamond compact (PDC) vanocheka
Polycrystalline diamond compact (PDC) cutters Diamond ndiyo yakaoma zvinhu zvinozivikanwa. Uku kuoma kunopa iyo yepamusoro zvivakwa zvekucheka chero chimwe chinhu. PDC yakakosha zvakanyanya pakuboora, nekuti inounganidza madhayamondi madiki, asingadhuri, kuita mangamu akakura, akapindana ...
Kubvumbi-08-2021 Chii Chinonzi Lab Dzakakura Madhaimondi?
Mumashoko akareruka, marabhoni akakura madhayamondi madhaimani akagadzirwa nevanhu panzvimbo pekucherwa pasi. Kana zviri nyore kudaro, unogona kushamisika kuti nei paine chinyorwa chese pazasi pemutsara uyu. Iko kunetseka kunovapo kubva kuchokwadi chekuti akawanda mazwi akasiyana akashandiswa kurondedzera ...
Kubvumbi-02-2021 Super Abrasives Musika Kuti Usvike USD 11.48 Bhiriyoni Na2027
Kuwedzera kwekudiwa kwezvakanaka uye zvekushandisa maturusi nekuda kwekukwira kugadzirwa kwemotokari uye zviitiko zvekuvaka kuri kufambisa kudiwa kwemusika weSuper Abrasives. New York, Chikumi 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Musika weSuper Abrasives Musika unotarisirwa kuzosvika USD 11 ...
Seinjiniya, kugadzira, uye kushambadzira kambani yedhaimani, isu tinozvimiririra se "Solution Provider yeVatengi veDhiimondi vatengi".
Chero kubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana mutengo wenyaya, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.kubvunza
9 Yunshan Road, Yakakwira-Tech Dunhu, Zhengzhou, Henan, 450000, China